Jubbaland oo ciidamo badan u dirtay duleedka Magaalada Kismaay... | Universal Somali TV
Jubbaland oo ciidamo badan u dirtay duleedka Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)
December 28 2016 05:33:40
Maamulka Jubbaland ayaa ciidamo badan oo dheeraad ah u diray deegaanno ku dhow magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo ay ka socdaan dagaallo u dhaxeeya ciidamada maamulkaasi oo kaashanaya kuwo deegaan iyo Al-shabaab oo dhinac ah.
Ciidamadan oo hubeysan ayaa lagu daabulay gaadiidka waaweyn ee dagaalka, waxaana la sheegay inay tagi doonaan deegaanno hor leh oo gobolka Jubbada Hoose kaga sugan yihiin Al-shabaab.
Aadan Koojaar oo ah taliyaha ciidamada Jubbaland oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamadan ay Al-shabaab ka saari doonaan deegaannada Jubbaland, gaar ahaan meelaha hadda dagaallada ay ka socdaan ee Jubbada Hoose.
Waxa uu tilmaamay Taliyaha inay u diyaarsan yihiin difaaca shacabka Jubbaland, islamarkaana ay ciidanka naftooda u huri doonaan inay la dagaallamaan Al-shabaab.
Ciidamada ayuu sheegay hujuumka ugu horeeya inay ku wajihi doonaan deeganada Buulo Xaaji iyo deeganada ku hareeraysan si Shabaab ay halkaasi uga sifeeyaan.
Kan-xigaQarax gaari lagu soo xiray oo saaka k...
Kan-horeDad tira badan oo lala xiriirinayo di...
33,284,305 unique visits